Tata Tiago New Model
टाटा मोटर्सले ल्यायो नयाँ टियागो डुअल टोन मोडल 18 May 2018
टाटा मोटर्सले आफ्नो पछिल्लो गाडी टियागो मोडलको अपार सफलतापछि आˆनो पुरानातथानयाँ संभावित ग्राहकहरुको लागि नयाँ टियागो डुअल टोन मोडल सार्वजनिक गरेको छ । फूलअप्सन मोडलको रु २६.९५ लाखमा पाईने यो गाडी एकदमै नयाँ, स्पोर्टी र विश्वसनीय देखिन्छ । यो गाडी १.२ लि. को रिभोटोर्न ईन्जिन सहित ८५ पि.एस. पावर भएको छ भने प्रति लिटर २३.८४किमि माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ ।
अरु थप विशेषताहरुमा दुईवटा एसआरएसएअर ब्याग्स, अटोमेटिक ब्रेकिङ्ग सिस्टम, रिभर्स पार्किङ्ग सेन्सर, मल्टी ड्राईभ मोड छ भने यसमा आठ वटा स्पिकर सहित हर्मनको ईन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, २४ वटा युटिसलटी स्पेस र २४२ लिटरको बुट स्पेस उपलब्ध छ । यीबाहेक अन्य थप विशेषताहरु पनि यसमा रहेको छ ।
सिप्रदीका प्रतिनिधि भन्छन् “हामी ग्राहकहरुलाई आफूले लगानी गरेको मूल्यमा राम्रो मोबिलिटी दिन चाहन्छौं । टाटा टियागोको सफलता मनाउँदै हामीले वर्तमानतथा सम्भावित ग्राहकहरुलाई नयाँ मोडलमा केही विशेष दिन खोजेका छौं । टियागो डुअल टोन स्टाईलिस र फ्रेस हुनुका साथै आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छ । नयाँ थप आकर्षक विशेषताहरु सहित आएको टियागो डुअल टोन टाटा ब्राण्डका गाडीहरु थप आकर्षक, सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रगतिको थप पहल हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”